FAYSAL CALI WARAABE OO BOGAADIYEY RAYSAL WASAARIHII IS CASILAY EE DALKA ITOOBIYA | Saxil News Network
FAYSAL CALI WARAABE OO BOGAADIYEY RAYSAL WASAARIHII IS CASILAY EE DALKA ITOOBIYA
Hargeysa(saxilnews.com):-Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee UCID, Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa isna ka hadlay sida uu u arko is-casilaada ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya Mr. Hailemariam Desalegn oo dhawaan ku dhawaaqay inuu kad egeyo xilkii raysal wasaarenimo iyo kii hoggaaminta ee xisbiga EPRF.
Feysal Cali Waraabe waxaa uu sheegay in uu istiqaallada raysal wasaaraha u arko xal lagu helo kari nabad iyo dawo loo helo xaalladacakiran ee waqtiyadii u dembeeyey ka taagnayd dalkaas. “Itoobiya muddooyinkanba waxa ka socday qalalaase siyaasadeed, waxa kacsanaa qawmidayaha qaarkood Oromadu haba u badnaatee, shir ayaana u socday xisbiga dalka xukuma ee EPRDF, is-casilaadda ra’iisul-wasaarihii dalkaasi waxaan u arkaa uun wanaag uu sameeyay si nabad loo
helo oo uu sadqeeyay kursigiisii”. Sidaas ayuu yidhi Feysal Cali Waraabe oo arrintanwax laga weydiyey isaga oo safar ku maraya wadamo ka tirsan qaaraddaYurub.
Gudoomiye Faysal Cali Waraabe ayaa intaas raaciyey “Waxay taasi ku tusaysaa in ra’iisal wasaaruhu ahaa nin bislaaday siyaasad ahaan, oo dantiisii ka horaysiiyay dantii qaranka iyo dantii Itoobiya, inaga (Somaliland) way inoo fiican tahay in Itoobiya ay nabad ahaato, geeska Afrikoo dhan ayaanay u wanaagsan tahay in Itoobiya ay nabad ahaato,”ayuu yidhi Faysal. Waxaanu intaa ku daray “Aad iyo aad ayaanan u hambalyaynaynaa is-casilaadda ra’iisal-wasaarihii hore ee Itoobiya, arrinta geesinimadda leh ee uu sameeyay, waana wax ku dayasho mudan in danta shaqsiga ah laga horaysiiyo danta ummadda.”
Dhinaca kale Safiirka dawladda Jamhuuriyadda Somaliland u qaabilsan u fadhiya Itoobiya, Cali Xuseen Ismaaciil (Cali Shoombe), ayaa iftiimiyey in Somaliland wax saamayn ah oo gaar ah aanu ku yeelan doonin is-beddelka siyaasadeed ee ka dhacay dalka Itoobiya, kadib markii uu khamiistii si lama filaan ah isu casilay Ra’iisal-wasaare, Hailemariam Desalegn.
Danjire Cali Shoombe wuxuu sheegay in isbeddelkani aanu wax saamayn ah oo taban ku yeelan doonin dalalka Geeska Afrika. “Itoobiya waa dal guun ah oo boqolaal sannadood soo jiray, waa dal ku kala socday sharci iyo qawaaniin, markaa saamayn gaara oo ay ku yeelanayso shacabka reer Itoobiya oo wax is-beddel ah ma dhacayo, hawluhu sidoodii ayey u soconayaan oo xidhiidhadu sidoodii ayay u jirayaan,”ayuu yidhi Safiirka Somaliland, waxaanu intaas raaciyey; “Wixii uu dan mooday ra’iisul-wasaaruhu markii ay ka wada tashadeen raggii la taliyeyaashiisa ahaa iyo madaxdii kale ee waddanka la maamulayay ayuun buu raacay. Somalilandna xidhiidh gaar ayey la leedahay Itoobiya oo sokeeye, oo nabadgeliyo, oo dhaqaale leh, oo siyaasad leh, oo diblomasiyad leh. Runtii waxaan filayaa hawluhu sidoodii ayay u soconayaan.
Wax is-beddel ah iyo wax saamayn ah oo ay arrintaasi ku yeelanaysaa xidhiidhadii dalalka jaarka iyo gobolkaba, ma arko in ay dhacayso.” Mr. Cali Shoombe, waxa kaloo uu sheegay in aanay jiri doonin wax saamayn gaara oo ay arrintaasi ku yeelanayso xidhiidhka ay Somaliland la leedahay Itoobiya. Wax cabsiya oo laga qabi karo in dhibaato ay dalkaasi ka dhacdaana aanay jirin.
“Dadka waxaan leeyahay waxba ha baqina, iska suga inta wax is-beddelayaan, waa laba ama saddex maalmood intay qaadanaysaa, waxaana arrintii u fadhiya xeer-beegtidii, guurtidii iyo hoggaankii dalka Itoobiya. Itoobiya waxay kaga duwan yihiin dalalka kale ee gobolka waa waddan saddex kun oo sannadood soo jiray, muddadaasna intaas oo is-beddel ayaa ka dhacay, Markaa saamayn gaara oo ay arrintaasi ku yeelanayso dalalka gobolka ma jirto, hawluhu sidoodii ayay u soconayaan, xidhiidhada ay dalalka kale la leeyihiina way soconayaan. Somaliland-na wax dhibaato ah oo ay ku keeni kartaa ma jirto, xidhiidhkeenuna wuu sii wanaagsanaanayaa. xidhiidhkeenuna ma aha xidhiidh shaqsiya, balse waa mid ka dhexeeya labadda ummadood iyo labadda dawladood, ” ayuu yidhi Cali Shoombe oo shalay Hargeysa ugu warramay warbaahinta kadib markii uu ka yimid Itoobiya.